Iibso Qormo Soomaaliya
Ka iibso Qormada Soomaaliya
Shaqsigaaga Iibso Qormo adigoon bixin lacag qarsoon. Ka dalbo Soomaaliya qoraalladeeda caadada ah ee ka soo baxda Ingiriiska iyo Mareykanka. 24/7 Taageero, Dib u eegisyo Bilaash ah iyo shaqooyin tayo sare leh waqti gaaban
Ma Qorsheyneysaa inaad Iibsato Qalabka Qorista Qormada?
Waxaa jira waxyaabo badan oo kala duwan oo aad sameyn karto markii aad raadineyso inaad iibsato adeegyo qoraal qoris ah si aad shaqada u qabato. Haddii aad xiiseyneyso inaad iibiso qoraaladaada, laga yaabee inaad rabto inaad ka dhigto kuwo waxtar u leh shaqo-bixiyeyaasha iman kara, ama laga yaabee inaad jeclaan lahayd inaad u adeegsato inay noqdaan tixraac ahaan fasal aad qaadanaysid. Si kasta oo ay tahay kiiska, waxaa muhiim ah in la ogaado waxa aad gelayso iyo waxa aad u baahan tahay inaad iska eegto. Halkan waxaa ku yaal tilmaamo aad maskaxda ku hayso haddii aad raadineyso inaad iibsato adeegyada qorista maqaalka.
Waxa ugu horreeya ee aad u baahan tahay inaad ka ogaato waa inaad raacdo shirkad gaar ah iyo in kale. Tani waa wax soo laaban doona mar labaad markaad raadineysid inaad u adeegsatid adeegga qorista qormada si aad u iibiso qoraaladaada ama aad u hagaajiso qoraaladaada. Waxaa jira shirkado badan oo halkaas jooga kuwaas oo ballan qaadi doona inay noqdaan kuwa ugu fiican. Haddii aad rabto inaad adeegsato adeeg qoris curis ah oo muddo soo jirtay, waxay u badan tahay inay dantaada ugu fiican tahay inaad eegto markhaatiyada iyo talooyinka dadka horay u adeegsaday adeegyadooda.
Waxa soo socda ee la arko waa shirkadda ay tahay inaad rabto inaad isticmaasho. Had iyo jeer waa fikrad fiican inaad weydiisato tixraacyo. Tani waxay ku siin doontaa fikrad wanaagsan oo ku saabsan waxa laga fili karo adeegga qorista qormada ee aad aakhirka dooraneyso. Habka ugu fiican ee lagu hubiyo inaad dooratay adeeg qorista qormada sumcad leh ayaa ah inaad hubiso in dadka aad la xiriirtay ay ku lug lahaayeen adeegga in muddo ah. Had iyo jeer waad wici kartaa si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan dadka aad la xiriirayso oo aad u aragto haddii ay hayaan wax ay kula wadaagaan.
Tilmaam kale oo muhiim ah in la xasuusto ayaa ah in la waydiiyo inta maqaal ee adeegga qorista qormada la iibiyo bil kasta. In kasta oo ay umuuqato inay fikrad fiican tahay inaad iibsato hal daraasad oo qormo ah, waa inaad u fiirsataa inta taraafikada ee adeegga maqaalku si dhab ah u helo. Haddii boqolkiiba tiro badan oo ka mid ah soo gudbinta maqaalku ay ka yimaadaan hal qof oo keliya, markaa waa inaad ka digtoonaataa. Way fiicnaan kartaa inaad iibsato qaddar yar oo maqaalo ah.
Kahor intaadan iibsan agabka maqaalka, waa inaad sidoo kale tixgelisaa inta qormadu noqonayso. Haddii aad u baahan tahay maqaal laba toddobaad gudahood ah, markaa ma aha fikrad wanaagsan inaad dalbatid adeegyo qoris ah. Si kastaba ha noqotee, haddii aad leedahay mashruuc muddo-dheer ah sida qormo loogu talagalay kuleejka, markaa waxaad u baahan kartaa inaad ka fiirsato iibsashada sahayda qorista ee jumlada. Kaliya iska hubi inaad awood u yeelan doonto inaad hesho qiimaha lacagtaada adoo dalbanaya tiro badan.
Ha ka waaban inaad weydiiso shirkadda aad ka fekereyso inaad isticmaasho haddii ay jiraan talooyin ku saabsan qorista qorista ama ilaha ay siiyaan macaamiisha. Shirkadaha qaarkood waxay macaamiishooda u fidiyaan arrimo qoraal ah oo ay isticmaali karaan. Tani waxay kaa caawin kartaa isku dubaridka curis qaddarin wanaagsan oo qaab dhismeed leh ku leh. Si kastaba ha noqotee, shirkadaha qaarkood waxay bixiyaan oo keliya qoraallo kooban oo qoraal ah si loo isticmaalo. Haddii ay arintu sidan tahay, markaa way kuu fiicnaan kartaa inaad meelo kale ka raadsato.
Sidoo kale, kahor intaadan iibsan agabka maqaalka, waxaa kuugufiican inaad booqato websaydhka shirkadda. Halkaas, waxaad ka arki kartaa noocyada adeegga qorista qormada ee ay bixiyaan iyo noocyada qormada qorista ee ay gacanta ku hayaan. Waxaad sidoo kale lahadli kartaa dadka isticmaalay adeegyadooda. Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad go'aamiso haddii ay leeyihiin waqti soo-celin degdeg ah iyo in kale. Waxaa jira shirkado badan oo shaqeeya goor dambe oo aan soo wicin taleefannada illaa laga gaaro waqtiga kama dambaysta ah ee qoraalka.
Haddii aad u baahan tahay caawimaad qorista qorista iyo haddii kaleba, had iyo jeer way kaagafiican tahay inaad iibsato adeegyo qoraal qoris ah halkii aad ku qori lahayd qormadaada kaligaa. Adeegyada qorista Qormada badanaa waxay leeyihiin xirfado tafatir oo kafiican waxayna yaqaanaan sida loo hubiyo in qoraalkaaga uu qumman yahay kahor inta uusan u aadin tifaftiraha. Sidoo kale waxaa kaagafiican inaad shaqaaleeysid qof aad taqaano inuu wax ka beddelo qoraalkaaga maxaa yeelay inta badan qorayaasha kuma fiicna inay wax ka beddelaan shaqadooda. Ilaa iyo inta aad ka iibsanayso caawimaad qorista qorista shirkad sumcad leh oo aad u isticmaasho ilaha internetka ee aad heli karto si aad wax uga barato qorista qorista iyo tafatirka, waa inaad awood u leedahay inaad qorto qormo aan iin lahayn.